Home Wararka Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay Baydhabo
[Deg Deg] Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay Baydhabo
Ugu yaraan saddex qof ayaa ku nafwaayey, in ka badan 8 kalena way ku dhaawacmeen qarax Jimcada maanta ah ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya nooca weerarka oo goobta uu ka dhacay ay ku sugnaayeen ciidamo kuwaasoo loo maleynayo in bartilmaameedka koowaad uu ayaga ahaa.
Saraakiil ammaanka oo u waramay MOL ayaa daaha ka rogay in dhaawaca oo isugu jira rag iyo dumar la dhigay isbitaalka weyn ee magaala madaxda gobolka Baay.
“Jugta qaraxu way cusleyd. Hase ahaatee, cidina si deg-deg ah uma sheegi karto noociisa,” ayuu yiri mid kamid ah saraakiisha oo magaciisa uga gaabsaday sababo in aan loo ogoleyn la hadalka saxaafadda iyo dhacdada oo baaris lagu bilaabay.
Goobjooge u waramay bogga MOL laguna magacaabo Liibaan Maxamednuur Aadan ayaa xaqiijiyey in qaraxa “aadka u cuslaa” uu ka dhacay goob lagu iibiyo Jaadka.
Dagaalameyaasha gacansaarka la leh maleyshiyadda Al-Qaacida Al-Shabaab ayaa la tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen falkaan maadaama ay aagaas ku xoogan yihiin.
Dhanka kale, qarax kale ayaa lagu waramay in uu ka dhacay isla gudaha Baydhabo gaar ahaan goob lagu keydiyo qaraxyada. Wali lama soo warin khasaaro ka dhashay falkaas.
Dhacdooyinkan ayaa imaaneysa maalin kadib markii hogaamiyeyaasha Soomaaliya ay Muqdisho ku saxiixeen heshiis doorasho oo xeerinaya in coddeynta ku dhacdo laba bilood.
Heshiiskaas ayaa kasoo baxay wadahadalo uu dibad-joog ka ahaa madaxweynaha muddo xileedkiisa dastuuriga ah uu dhamaadey Farmaajo kaasoo caddeeyay in waajibaadkiisa uu yahay sidii uu uga shaqeyn lahaa dhaqan-gelinta iyo meelmarida heshiiskaas.
Previous articleQaar kamida Musharaxiinta oo durbadiiba bilaabay in sheegtaan in wadamo shisheeye maalgalinayaan
Next articleQarax xoog leh oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Faahfaahin dheeri oo kaso baxay dil qorsheysan oo xalay ka dhacay...